Loholona Rajaonarivelona Pierrot : tsy misy mety milaza hoe mpanohitra | NewsMada
Loholona Rajaonarivelona Pierrot : tsy misy mety milaza hoe mpanohitra
Mafanafana ratsy ny tontolo politika, na toa mangingina aza. Aiza ny mpanohitra? Milaza ny loholona Rajaonarivelo Pierrot fa tsy misy milaza ho izany…
“Misy rafi-panjakana ao anaty lalàmpanorenana izay azon’ny mpanohitra idirana. Nefa hatreto, tsy misy mety milaza hoe mpanohitra. Fanehoan-kevitra no betsaka. Raha tsy sarisary faniratsirana izany, na sanatrian’ny vava: fanompana na miendrika fanalam-baraka.”
Io ny fanehoan-kevitry ny loholona sady filohan’ny antoko MDM, Rajaonarivelo Pierrot, teny Ampandrana, afakomaly, momba ny toeran’ny mpanohitra amin’izao toe-draharaham-pirenena izao. Malalaka ny olona amin’ny fanehoan-kevitra, fa tsy tokony ho tonga amin’ny fanakorontanana. Raha tsy fanakorontanana, tsy hita izay olana amin’ny fanehoan-kevitra. Tsy voatery hitovy hevitra ny olona…
Misy ny rafitra natokana ho an’izay te hampiseho ny heviny, tsy voatery hitovy amin’ireo eo anivon’ny fitondram-panjakana amin’izao fotoana izao, araka ny fanazavany. “Tsy tsara ve ny ao anatin’izany fanajana ny demokrasia, raha tiana hahomby ny hevitra hitsarana sy mba hanitsiana ny zavatra tsy mety eo amin’ny fitondram-panjakana? Manao hevitra izay hidirana ao anatin’izany rafitra izany”, hoy izy.
Tsy mampijoro ny mpanohitra ny afitsoky ny mpitondra
Hatramin’izao, tsy mivoaka ny didy fampiharana momba ny mpanohitra. Anisan’ny mahabanga ny toeran’ny mpanohitra eny anivon’ny Antenimierampirenena sy ny Antenimierandoholona izay, na efa hisasaka aza ny fe-potoam-piasana. Manao izay hanakanana ny mpanohitra amin’ny fomba rehetra ny fitondram-panjakana? Na ny lalàna aza, tsy hajaina sy tsy ampiharina. Anisan’ny manosika ho azy ny mpanohitra hibirioka any amin’ny tsy ara-dalàna izany?